Obstetricians Kwaye Gynecologists Job Inkcazelo / Duty Template And Iindima - JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Obstetricians Kwaye Gynecologists Job Inkcazelo / Duty Template And Iindima
Jacob Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga Shiya amazwana 1,809 Views
Oogqirha abanikela amatyala zokhathalelo lwempilo enxulumene zabasebenzi okanye kubeleka nabo babone, phatha, nokuncedisa ekuthinteleni iimeko kumanenekazi, ingakumbi ezo eziphembelela iinkqubo yokuzala. Ayikwazanga kwakhona unyango jikelele kwabasetyhini.
Khathalela kunye nedilesi ladies.
Kutyhilwa ubuchule uxoxe iziphumo zovavanyo okanye amayeza enikwa ngokusebenzisa abaxhasi.
Handle izifo izitho zobufazi.
Iliso izifo peopleA nokuphuculwa kwaye sihlaziye izisombululo njengoko kudingeka.
ahlinzwe njengoko okanye afeze iindawo omama kwakufuneka ukugcina peopleWI zempilo kunye nokuvelisa abantwana ukholosile.
Ukumisela okanye unikele Isisombululo, amayeza, kwakunye unyango oluthile ukuba ezinye ukunyanga okanye ukunciphisa imeko, usulelo, okanye umonakalo.
Vavanya ulwazi khangela-up, amabali, hlola iinzuzo, okanye amaxwebhu ukuhlalutya imeko yomguli.
Qokelela, ifayile, kwaye ugcine nokugcina data ngamnye, ezifana bake zonyango, amabali, kunye neziphumo zeemviwo.
Guide izigulane kunye nabantu basekuhlaleni malunga nokuthintela izifo, kunye nomsebenzi, sazala.
Nxulumanisa ekuhluphekeni specialist into enye okanye ingcali lwempilo xa kuyimfuneko.
Jonga okanye unikezele oogqirha ezongezelelweyo kunye nezisombululo ukuya.
Ekhawulezileyo nokulungelelanisa nezenzo neengcali , abafundi, abancedisi, ochwepheshe, amanesi, kunye nabanye abasebenzi bezempilo.
Strategy, isicelo, okanye ukulawula izicelo zezempilo iinkampani, okanye zifakwe malunga unyango kunye nokuphepha iingozi okanye izifo.
Lungisa Govt kunye ngokuqinileyo iingxelo kwi angqina abasebenzi, ukunikezelwa, bayafa, kanye izibalo usulelo, okanye mhlawumbi igama yezonyango umntu.
Yenza isifundo ukuvelisa okanye ukuhlola unyango, iziyobisi, okanye amacebo ukunqanda okanye ukulawula isifo okanye ukwenzakala.
Occupation Iintshukumo Need
Ukufunda imihlathi Isicatshulwa-Isicatshulwa kunye nesiqulatho wadala amaphepha umsebenzi ezihambelana.
Active Ukuphulaphula-Ukubonelela ulwazi lonke ntoni abanye abantu bathi, ukufumana ixesha kunye namandla ukuqaphela izinto zadalwa, imibuzo imibuzo ngendlela efanelekileyo, yaye emlonyeni kwi izihlandlo ukuba ezingafanelekanga.
Ukuvelisa-Ephepheni kungekhona nje ezingafanelekanga ukuba iimfuno zemalike bexoxa ngendlela eyiyo.
Ukunxibelelana-Ukuthetha nabanye ukuba ukwabelana data kwamandla.
Mathematics-Ukusebenzisa maths ukuba ukusombulula iingxaki.
izisombululo Technology-nokusetyenziswa kunye nemigaqo yenzululwazi yokusombulula iingxaki.
Ecinga ukuba kuyingozi ukucinga kakhulu-nokusetyenziswa kunye nesizathu ukubona ubuthathaka kunye ebheka mbalwa kwamathuba okukhetha eso, iingcamango okanye iindlela ubunzima.
ingxaki ingxaki izinqumo Active Learning-Ukwazi ezirheshayo ulwazi olutsha ngokuphathelele zombini ngoku kunye.
Ukufunda Iindlela-Ukukhetha nokusetyenziswa educationANDtutorial iindlela kunye neenkqubo ezazibonisa ukuba imeko ezithile xa ekufundeni okanye imiba zokufundisa idlamkile.
Ukubeka iliso-Ukongamela / Ukumisa usebenziso labantu abongezelelweyo, wena, okanye iinkampani ukwenza uphuhliso okanye uthathe amanyathelo olungiso.
Social Perceptiveness-Ukuba abazi kwabanye’ ukuthambekela kutheni baphendula njengoko benza kunye nolwazi.
Uququzelelo-Ukulungisa izenzo ngokunxulumene kwabanye’ ukuziphatha.
Azithenge-Ndeyisela abanye ukutshintsha imikhwa okanye iintloko zabo.
Mediation-Ukubonelela abanye ngokuhlangeneyo nokukhangela ukuba abuyisele mahluko.
Ukuncedisa-Uqeqesho abanye HOWTO ukwenza intshukumo.
Orientation-Ukuthatha Service ufuna izicwangciso ukunceda abantu.
Advanced Problemsolving-Chonga imiba ezintsonkothileyo siphanda izibakala ezinxulumene Ukuvavanya ukuba ukwakha ukhetho nokuzalisekisa iinketho.
Imisebenzi Uphando-Ukufundisisa ngumba ezithengiswayo kwaye ifuna ukuvelisa indlela.
Technology Design-Building okanye izixhobo esalo kunye nobuchwepheshe ukunceda iimfuno umntu.
Izixhobo Selection-isigqibo izixhobo kunye nezixhobo xa uhlobo kwakufuneka kakhulu ukwenza umsebenzi.
Imifuziselo Izavenge-Kufakwa, izixhobo, ezintambo, okanye iipakethe ukufeza specs.
Development-Publishing iinkqubo zekhompyutha malunga ujonge ukuba ezininzi.
Operation Tracking-Ukubona uvavanyo, izibambo, okanye iimpawu ezahlukileyo ukuqinisekisa ukuba kukho umatshini owenza ngokufanelekileyo.
Imisebenzi kunye Handle-oPhetheyo imisebenzi lweenkqubo okanye iimveliso.
Ulondolozo-Ukwenza nokulungiswa kuyinto eqhelekileyo kwi gear isigqibo nini na, oluhlobo luni yesondlo iza kuba yimfuneko.
Zokusombulula-Ukucacisa izinto ngasemva iimpazamo ezithe ukusebenza ukhetha oko ulwalathiso ukuya ngale.
Ukulungisa-belungisa iinkqubo okanye iimveliso usebenzisa izixhobo ezinqwenelwa.
Uviwo-Ukwenza Quality-Control uvavanyo nohlolo iimveliso, abanikezeli, okanye iinkqubo ukuba ndigwebe esemagqabini okanye ukusebenza.
View kunye kwezigqibo-Sicinga iinzuzo kunye namaxabiso ngokubanzi amanyathelo zingaba ukuba khetha eyona efanelekileyo.
Uhlalutyo Ukwazi oko uhlobo nkqubo kufuneka isebenze kunye nendlela uphuculo kwimisebenzi, izimo, kunye kwendalo nefuthe iinzuzo.
Systems Evaluation-Ukumisela amanyathelo okanye ezibonisa yokusebenza kwenkqubo kunye kuthelekiswa neenjongo kwefowuni, ichanekile okanye ukuziphatha ukuze kuphuculwe ukusebenza.
Ixesha-Management-Ukusingatha abanye’ isihlandlo kwakunye oneis mzuzu lobuqu.
Administration of Financial Resources-isigqibo imali iya kungekudala kusetyenziswa njani ukuba ndiwufezile umsebenzi, nentengiso ezi amatyala.
Ulawulo Materials Resources-Ukufumana kunye nokuhlola ukuze efanelekileyo yokusebenzisa iimveliso, ezithuba ezabelwe, kunye namacandelo ukuba kukho imfuneko yokwenza umsebenzi othile.
Kweliso Abasebenzi Resources-Ukuseka, khuthaza, nokuqondisa abantu besenza, ukwahlula bantu kakuhle kakhulu lo msebenzi.
uqeqesho Isiqinisekiso Izidingo ulwazi
Engaphezulu kwe 4 iminyaka, ixhomekeke ku 6 iminyaka yaye kubandakanya,
Career Leadership Skills Imiqathango
Impumelelo / Ukuzama – 96.18%
ukuzimisela – 94.79%
Project – 90.85%
Authority – 90.08%
Cooperation – 95.73%
Umba Abanye – 96.80%
Positioning Social – 87.01%
Ukuzibamba – 96.39%
pressure Threshold – 97.20%
nokuvumelana – 99.20%
Ukuqaphela Iinkcukacha – 99.20%
inkululeko – 92.48%
Intuthuko – 87.36%
sicinga – 91.53%